Izimpawu eNingizimu Afrika ze-Coat of Arms
Isigqoko esisha sezakwabo eNingizimu Afrika sakhiwe ngamagceke amabili, okuthiwa isimo se-oval sisekelo nesimo sokukhuphuka kwe-oval, ngezansi yizilinganiso zezimpawu ezikhethiwe ezisiza ukutshela indaba yaseNingizimu Afrika nokuqalwa kwentando yeningi bonke abantu bayo.
I-Oval Shape of Foundation
I-Motto - Kubhalwe ngolimi lweKhoisan lwabantu / Xam,! Ke e: / xarra // ke, lisho ukuthi 'Abantu abahlukahlukene bahlangana'. Ngesilinganiso ngasinye, kubonisa ubunye phakathi kwemicabango nezenzo zomuntu. Ngezinga elihlangene, kubonisa ukuthi njengesizwe kufanele sibe munye kanye nomqondo wokuziqhenya kanye nokuziqhenya kwezwe.
Izindlovu - Izindlovu ziyaziwa ngokuba nokuhlakanipha namandla. Esigqokeni sezingalo, nazo zimelela ukulinganisela nokuphakade.
Izindlebe Zokolweni - Ukolweni ukhombisa ukuzala. Ukuhluma nokukhula koroku kufanekisela ukukhula nentuthuko yesizwe sethu ukufeza amandla angenamkhawulo. Iphinde ibhekane nokudla kwabantu futhi imelela ukusizwa kwezolimo emhlabeni.
I-Shield - Inemisebenzi emibili kwengubo yezingalo, imelela ukuvikela ngokomoya kwesizwe sethu futhi ibuye ibambe izibalo ezimelela ukuthi singubani.
Amanani Abantu - Lezi zibalo zitholakala emadolobheni ahloniphekile edumile aseNingizimu Afrika aqoshiwe edwaleni olutholakala etsheni laseLinton, manje elihlala eNyuvesi yaseNingizimu Afrika eKapa. Njengoba izakhamuzi ezindala kunazo zonke zezwe lethu, i-Khoisan, zingumlando wesintu esijwayelekile kanye namagugu njengezakhamizi zaseNingizimu Afrika. Izibalo esithombeni zikhonjiswe esenzweni sokubingelela, lokhu kufanekisela ubumbano. Zibuye zimelele uhambo lomuntu lomuntu olushintshashintshayo zibe nomqondo omkhulu wokuba ngumuntu wesizwe futhi ngokwanele, ubuntu bomphakathi.
I-Spear ne-Knobkierie - Lezi zifanekisela izimpawu zokuzivikela kanye negunya, nazo zimelela imilenze enamandla yenyoni yenobhala. Njengoba umkhonto nemigqa yokulala belele phansi, kufanekisela ukuthula.
I-Oval Shape of Ascendance
I-protea - iboniswa njengombonakaliso omele ubuhle bezwe lethu, imbali imelela amandla ethu njengesizwe ekuphishekeleni ukuvuselelwa kwe-Afrika. Iphinde ibonise ukukhula emhlabeni futhi ikhulise kusuka phezulu, ebonisa ukuhlanganiswa okuphelele kwamandla. Imibala ethandwayo kakhulu e-Afrika iye yabelwe iphrotheni; eluhlaza, igolide, obomvu nokumnyama.
UNobhala Bird - Esigqokeni Sezikhali Inyoni yobhala iboniswa ukuthi iyindiza, ibonisa ukukhula nokusheshisa. Inyoni enamandla, enemilenze, emele umkhonto nomkhonto, isiza ekuzingeleni izinyoka, okufanekisela ukuvikela isizwe ngokumelene nazo zonke izitha. Inyoni iyisithunywa sezulu, isho lapha ubukhosi bukaNkulunkulu. Amaphiko aphakanyisiwe yiwuphawu lokuphakama kwesizwe sethu, ngenkathi ehlinzeka nokuvikelwa. Inyoni enobhala iboniswa ngegolide, ekhombisa ukuhlangana kwayo nelanga namandla amakhulu.
Ilanga Eliphumayo - Ilanga liwuphawu lokukhanya, ubuhle namandla. Ifanekisela ulwazi, ukwahlulela okuhle, amandla, ikhono lokuzindla kanye nesithembiso sokuzalwa kabusha. Kuwumthombo wazo zonke izinto zokuphila, zokukhanya futhi zimelela ukuphela komuntu. Zonke izakhi ze-Coat of Arms zihlanganisa ukwakha ububunjwa obuphansi nangaphezulu obubunjwa obumba uphawu olungenamkhawulo. Kusukela emathangeni kuze kufike ilanga ephakama ukubunjwa okwakhiwe yilokho lweqanda elimnyama elivela kuyo inyoni yenobhala. Ngokwemvelo, kusho ukuzalwa kabusha komoya wesizwe sethu esikhulu nesiqhawe saseNingizimu Afrika.Translated by Nsika Khoza